Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Mey 2014
Tantara tamin'ny Mey, 2014
“Quand le village se réveille”: Bilaogin-Kolontsaina Maliana Vaovao
Mpanoratra Boukary Konaté · Mediam-bahoaka
"Quand le village se réveille": Tetikasa vaovao hanangonana sy hizarana ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao nentim-paharazana ao ambanivohitry Mali, ary mba hampielezana ny fidirana aterineto eny amin'ny faritra ambanivohitra ihany koa.
Nandresy Tamin'ny Fifidianana Ho Filoha Ejipsiana i Sisi; Fahatelo Kosa no Misy An'i Sabahi Hany Mpifaninana Aminy
Nandresy be ny Jeneraly Abdel Fattah Al-Sisi, nanamontsana an'i Hamdeen Sabahi, hany mpifaninana aminy izay tafiditra ho laharana fahatelo. Nivoaka ny ampaham-bokatra taorian'ny telo andro nifidianana. Voatatitra fa nahazo ny 93,3 isan-jaton'ny vato i Sisi, naka ny laharana fahatelo koa i Hamdeen ary ny 3,7 isanjaton'ny vato manankery no azony.
Mpanoratra María Angélica Marín · Amerika Latina
Mpanoratra Mi voz · Amerika Latina
Mpanoratra Laura Morris · Fanadihadiana Tranga
28 Mey 2014